MACLUUMAADKA EYGA TILMAAMAHA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Saacadda POINT Bog furahaagu ma taageerayo sumadda maqalka.
Tilmaamaha, sidoo kale loo yaqaan 'Pointer English', waa eey ugaarsi xoog leh. Madaxa wuxuu u egyahay sida balalku u dheer yahay. Qoorta ayaa dheer. Afku waa qoto dheer yahay. Joogsiga ayaa si fiican loo qeexay. Sanka waa midab madow ama bunni ah eeyaha dahaarka leh ee mugdiga ah waxaana laga yaabaa inay ka fudud yihiin ama midab hilib leh ku leeyihiin eeyaha fudud. Ilkaha waa inay ku kulmaan heer ama qaniinyada maqasku. Indhaha wareegsan ayaa mugdi ah marka la barbar dhigo calaamadaha jaakadda. Dhegaha sudhan ayaa xoogaa tilmaamaya dhamaadka. Lugaha hore waa toosan yihiin. Dabo ayaa xididku ka weyn yahay, oo hal dhibic ku tilaabsanaaya. Koodhku waa gaaban yahay, siman yahay oo cufan yahay. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah ugu horrayn caddaan leh beerka, liinta, madow iyo / ama calaamadaha oranjiga ah, midkood la dhejiyay ama dhibicyo leh, ama midab ahaan ku adkaan kara Waxaa laga yaabaa in seddex geesood laga dhigo.
Tilmaamayaasha Ingiriisigu waa tamar aad u sarreysa, iyo ugaarsato aad u xamaasad badan. Leyli ku filan waxay ku xasilloon doonaan guriga. Caqli badan, u heellan, daacad ah oo nadiif ah, iyagu waa dulqaad badan yihiin, saaxiibtinimo leeyihiin, kalgacal leeyihiin, carruurtana jecel yihiin oo ay saaxiib dhow la yihiin qoyska. Waxay si fiican ula qabsadaan xaaladaha cusub. Waa lagu sii haysan karaa shisheeyaha. Bulsho wanaagsan da'da hore iyo mulkiilaha eeyga, hubi inaad maskax ahaanta ku adkee marka eygu wuxuu quudin karaa tamartaada si looga fogaado xishood la’aanta. Aadanaha neerfayaasha ah waxay u muuqdaan inay leeyihiin eeyo neerfa maxaa yeelay eeygu wuu dareemi karaa shucuurtaada. Haddii aadan bixin wax kugu filan jimicsi maskaxeed iyo / ama jir ahaaneed waxay noqon doonaan kuwo heer sare ah oo mashquuliya oo noqon kara neerfaha iyo wax burburinta . Haddii ay dareemaan in milkiilayaashoodu aysan ahayn maskax adag sida naftooda waxay noqon doonaan waxoogaa rabitaan ah sida ay rumaysan doonaan inay u baahan yihiin inay noqdaan hogaamiyaha xiriirka . Waxay ku qaylin doontaa buuqyada laga shakiyo, laakiin ma ahan ilaaliye. Dareenka ugaarsiga ayaa hore u soo baxa. Eydu waxay bilaabi doonaan inay soo bandhigaan dabeecad tilmaam ah markay yar yihiin 8 toddobaad. Eeyahaani guud ahaan waxay ku fiican yihiin xayawaannada kale mana badanaaba eey-dagaal-badan.
Dhererka: Ragga 22 - 24 inji (55 - 62 cm) Dumarka 21 - 24 inji (54 - 60 cm)
Miisaanka: 44 - 66 rodol (20 - 30 kg)
Ku soo dhowaanshaha sinta dysplasia, dhibaatooyinka tayroodhka iyo ciriiriga. Sidoo kale xaaladaha maqaarka.
Eeyahaas laguma talinayo nolosha guriga. Waxay dhex dhexaad firfircoon yihiin gudaha waxayna ku fiican yihiin acreage.
Eygan waa mid firfircoon oo aan daal lahayn. Aad ayey muhiim u tahay inay hesho jimicsi xoog leh maalin kasta si looga hortago degganaanta daran ee gudaha. Noocani waa wax ka badan ciyaar xitaa qoyska ugu firfircoon loomana baahna in loo qaato sidii xayawaan guri joogta ah ilaa ay damaanad qaadi karaan jimicsi xoog leh. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, kacsan, socod dheer , orod ama ku garabsoco markaad baaskiil wado. Waa saaxiibbo orod fiican. Qaarkood waxay jecel yihiin inay dabaashaan oo ay dib u soo ceshadaan in kasta oo aan loo abuurin hawshaas. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaaminta, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasna wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Bar iyaga inay galaan oo ka baxaan albaabka iyo irdaha laga galo aadanaha. Marka eeyga loo barto inuu u shaqeeyo eey ugaarsi ah waa in la baro farqiga u dhexeeya goorta ay tahay inuu shaqeeyo iyo goorta kale. Marka aan la gaadhin waqtigii ugaarsiga, eeygu waa inuu si xushmad leh cidhib ugu dhejiyaa xadhigga mulkiilaha.
Qiyaastii 13-14 sano.
Jaakadda siman ee Tilmaame-yaasha ayaa aad u fudud in la xannaaneeyo. Kaliya si joogto ah ugu caday burush adag oo nadiif ah oo maydha markii loo baahdo oo keliya. Is xoqin leh gabal shukumaan ah ama chamois ayaa ka tagi doona jaakadda dhalaalaysa. Sidoo kale fiiri cagaha, gaar ahaan ka dib marka eey jimicsi sameyso ama shaqeyneyso. Si fiican u qalaji eeyga ka dib ugaarsiga si looga hortago qarqowga. Dhagaha waa in si joogto ah loo hubiyaa. Noocani waa celcelis daadiya.
Xusuus-qorihii ugu horreeyay ee tilmaamaya ee tilmaamaha wuxuu ku sugnaa England qiyaastii 1650. Tilmaamaha waxaa lagu horumariyey inuu ka gudbo Tilmaame Talyaani ah , Foxhound , Dhiigbax , Greyhound , Newfoundland , Dejiye , iyo Bulldog . Magaca laga soo dheegtay sida eey u taaganyahay dhaqdhaqaaq la'aan markuu dhibcihiisa calaamadeeyo sidii inuu si toos ah ugu tilmaamayo. Kahor ugaarsiga qoryaha ayaa caan ahaa, Tilmaamayaasha waxaa loo isticmaali jiray bakayle loogu talagalay Greyhound si ay ugaarsadaan. Horraantii 1700-aadkii Tilmaamuhu wuxuu caan ku noqday ugaarsatada. Aad ugu fiican qabashada urta iyo u ugaarsiga ugaarsiga jihada saxda ah, eeyadu aad ayey u dhaqso badan yihiin waxayna dabooli karaan dhul aad u tiro yar waqti gaaban waxaana badanaa loo isticmaalaa in lagu soo daayo shimbiraha. Maaha eeyaha biyaha lamana filayo inay soo ceshadaan dilka. Eeyadu si fiican ayey u shaqeeyaan cimilada diiran laakiin si fiican uma shaqeeyaan marka ay aad u qabow tahay. Tilmaame-yahanka Ingiriisiga ah wuxuu badanaa ku guuleystaa Tijaabooyinka Goobta Fiican ee dhammaan noocyada kale ee tilmaamaya. Tilmaame-baraha ayaa markii ugu horreysay AKC aqoonsaday 1884.
AF = Goobta Mareykanka
FDSB = Buugga Ey Door Field
Dog Poyter Dog - Sawir waxaa iska leh David Hancock
Duuliye qubeyska ku jira (waqtiga qaboobaha si ay u qalasho)
Kani waa Duuliye (midig) iyo Scout (bidix). Labaduba waa 10 bilood jir sawirkan. Lahaanshaha sawirka reer John
'Kani waa Grendel, tilmaameena. Midabkeedu waa caddaan leh xarkaha liinta. Grendel wuu ka weynyahay 2 sano waana farxad buuxda. Iyadu waa eey ugaarsi ugaarsi ah, kaas oo ka caawiya sidii looga takhalusi lahaa tamarteeda. Iyadu way caqli badan tahay, laakiin eeyahaani waa kuwo madax adag oo aan si fudud u fududayn in la tababaro. Marxaladooda eey waxay socotaa ilaa 2 sano waana WAALAN tahay waqtigaas, marka inaad 2 sano mooyee mooyee oo aad saacado badan oo waqti ah kubixin karto tababar iyo jimicsi maalin kasta, kani ma aha eey kuu dhalatay. Iyadu waa xayawaan aad u qiimo badan oo baradho yar yar oo aad u macaan markay jimicsi joogto ah , laakiin iyadu waxay kuu kaxayn doontaa nuts haddii aad ilowdo inaad maalin uun dibadda u bixiso! Haddii aad ka fikireyso noocyadan, fadlan maskaxda ku hay inay ku dhasheen inay yeeshaan awood ay ku ordaan masaafo dheer saacado iyo saacado safarro ugaarsi ah, marka haddii aadan bixin karin jawi ugaarsi ama wax lagu beddelo, ma aha runti waa xaq eey. Waxay u badan tahay inay tilmaamto balanbaalisada beerta dhexdeeda intii ay ku ciyaari lahayd kubbadda teniska iyo xaaladaha ay ku ordi karto bilaash, way iman doontaa oo kula soo xiriiri doontaa adiga ilbiriqsi, laakiin waxay waqtigeeda intiisa badan ku qaadataa ugaarsiga haadda. Iyadu aad ayey u madax bannaan tahay banaanka, laakiin waxaa loo tababbaray inay si dhaqso leh u timaado foodhi. Iyadu waa mid aad u adkaysi badan oo waxay u ordi doontaa sida waalan barafka, iyada oo loo marayo burush qaro weyn, ciid, waxayna ku dabaalan doontaa wabiyada iyo xitaa badda. Aad ayey u socotaa in runtii ay adagtahay in culeyskeeda la saaro, taas oo aan maqlay inay runti caan ku tahay fardaha farta ku fiiqaya. Isku soo wada duuboo, Grendel waa eey layaableh. Iyadu waa eey ugaarsi ah iyada oo loo marayo iyada oo loo marayo sidoo kale xayawaan rabaayad ah. Awood ayay u leedahay qalad, laakiin marka si habboon loo jimicsado runti way ku macaan tahay guriga, aad ayey u koolkoolisaa. Waan jecelnahay tilmaamaheena!
adhijirka Australiyaanka ah ee lagu qasay collie xadka
Grendel Tilmaamaha kadib maalin ugaarsi ah
Grendel Tilmaamaha oo sariirta ku seexanaya
Grendel Pointer-ka oo jira 2 sano jir - midabkeedu waa caddaan leh xarkaha liinta.
Eeg tusaalooyin badan oo tilmaamaha ah
Sawirada tilmaamaha 1
Sawirada tilmaamaha 2
Sawirada tilmaamaha 3
iskudhafka mastiff rottweiler ee iibka ah
Pyrenees weyn oo ku xigta aadanaha
xiisaha of spaniels Springer ingiriisiga
minipper jackcher russell mix
laba ey oo dumar ah isma fahmi karaan
shaybaarka madow iyo jarmalka jarmalka gaagaaban
gorgor af badan oo iib ah